Akụkọ - Laser Anti-kanta na teknụzụ maka nkpuchi
Laser Anti-kanta na teknụzụ maka nkpuchi
Kemgbe ntiwapụ nke COVID-19, ihe nkpuchi abụrụla ihe dị onye ọ bụla mkpa kwa ụbọchị. Otú ọ dị, nnukwu ọdịiche dị mkpa mere ka ụfọdụ ndị na-ere ahịa iwu na-akwadoghị jiri ya mee ihe, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe mkpuchi dị ala abanyela n'ahịa ahụ. Okwu metụtara "adịgboroja nkpuchi" na "nkpuchi nkpuchi ihu" apụtawo ugboro ugboro na ọchụchọ na-ekpo ọkụ. Ihe nkpuchi ugha abughi na enweghi nchedo, ma nwekwa nsogbu nke mmetuta site na mmeputa gburugburu ebe obibi na-ezighi ezi, nke di oke ojoo n’aru aru mmadu. Mostzọ kachasị ụzọ iji chọpụta ihe nkpuchi bụ ịlele akara mgbochi mgbochi laser.
Maka igwe 3M, N95 / KN95 nkpuchi, enwere ike ịmata ya site na mpempe akwụkwọ mgbochi adịgboroja na igbe nkpuchi. Akara nke ezigbo nkpuchi ga-agbanwe agba site n'akụkụ dị iche iche, ebe akara mkpuchi nke adịgboroja ahụ agaghị agbanwe agba. Maka ihe nkpuchi mejupụtara na nnukwu, enwere ike ịkọwapụta eziokwu site na ikiri okwu ndị dị na nkpuchi ahụ. A na-eji ezigbo akara ederede nke 3M akara laser na ahịrị diagonal, ebe a na-ebipụta adịgboroja na ink na ntụpọ (akara nke ink na-enweghị atụ).
N'ezie, ọ bụghị naanị na a ga-eji teknụzụ laser na-egbochi adịgboroja iji chọpụta izi ezi nke ihe nkpuchi, kamakwa na-arụ ọrụ dị mkpa na ngalaba nri, ọgwụ, ụtaba, ịma mma, na ngwaahịa elektrọnik. Enwere ike ịsị na etinyere teknụzụ na-emegide teknụzụ laser n'akụkụ niile nke ndụ anyị.
Dị ka a ụdị ọhụrụ nke laser marking technology, na-akanye mmetụta nke eriri laser marking igwe bụ nnọọ kpọmkwem. Akara akara ahụ nwere ike iru millimeta ma ọ bụ akara micron, nke na-eme ka o sie ike i imitateomi ma gbanwee aha mmado. N'ihi na ndị na akụkụ na obere na mgbagwoju shapes, na eriri laser marking igwe nwere ike mfe mezue marking ọrụ. Ọ bụghị naanị na mmetụta dị ezigbo mma, mana ọ gaghị akpọtụrụ ihe ahụ ozugbo, ọ gaghị emebi ihe ahụ.
Ihe nrịbama na-adịgide adịgide, agaghị aghokwa ya ka oge na-aga, nke mere na ndị nrịbama n'onwe ya nwere ọrụ nke mgbochi. Mana enwere ike adịgboroja. Yabụ, n'ịtụle njirimara nke igwe laser na-achịkwa kọmputa, BOLN laser haziri sistemụ akara laser na iji mmekọrịta na sistemụ nchekwa data nke ụlọ ọrụ. Mgbe ijikọ ọrụ nchekwa data na sọftụwia akara, onye ahịa nwere ike ịchọpụta koodu ahụ ma mata ọdịiche nke ngwaahịa a. Ihe mgbochi mgbochi data nwere ike ịbụ ederede, akara ngosi, DM ma ọ bụ koodu QR. Ka ọ dị ugbu a, akụrụngwa nwere ihe na-agụ akara, nke nwere ike ịchọpụta ọdịnaya koodu ahụ ngwa ngwa ma nyochaa ọkwa koodu ahụ, na-achọpụta oge mmepụta oge na ịdebe ngwaahịa maka traceability na mgbochi.